को हुन् पुटिनकी छोरी, जसलाई कारोनाको पहिलो भ्याक्सिन दिइयो ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ ग्लोबल ∕ को हुन् पुटिनकी छोरी, जसलाई कारोनाको पहिलो भ्याक्सिन दिइयो ?
एजेन्सी साउन ३१, २०७७ गते ९:१५ मा प्रकाशित
रुस — रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनल् रुसले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन तयार पारेको दाबी गरेका छन् ।
ल्यूडमिला लाइमलाइटबाट टाढै बस्छिन् । यद्यपि, रुसकी प्रथम महिलाको रुपमा उनले थुप्रै विदेश यात्रा गरेकी थिइन् । – बीबीसी